By ကျော်မျိုး 18 August 2018
မြန်မာ ရေလုပ်သား ၆ သောင်းကျော်ကို နှစ်နိုင်ငံ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ(MoU) ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ က ခေါ်ယူရန် အစိုးရချင်း ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနတွင် ထိုင်း အလုပ်သမား ဝန်ကြီး Pol. Gen Adul Sangsingkeo နှင့် မြန်မာ အလုပ်သမား ဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေတို့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း လုပ်သား အခွင့်အရေး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် MoU လုပ်ငန်းစဉ် မြှင့်တင်ရေးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ကြပြီးနောက် ၎င်းတို့က မီဒီယာများအား ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုင်းအလုပ်သမား ဝန်ကြီးက ထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် ရေလုပ်ငန်း ကဏ္ဍတွင် ရေလုပ်သား ၆ သောင်းကျော် လိုအပ်မှုရှိနေ သည့် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနသို့ လာရောက် အကူအညီ တောင်းခံခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ထိုင်း အလုပ်သမား ဝန်ကြီး Pol. Gen Adul Sangsingkeo က“ဒီအလုပ်သမားတွေကို MoU စနစ်နဲ့ ခေါ်ယူနိုင်အောင် စီစဉ်လျက် ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ တရားဥပဒေ အတိုင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ လုပ်အားခနဲ့ ဥပဒေကနေပြီး ကာကွယ် စောင့် ရှောက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကိုလည်း ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေကလည်း မြန်မာရေလုပ်သားများကို ထိုင်းဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသော တရား ဝင် လုပ်သားများ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုလားကြောင်း၊ ရေလုပ်သားများ စေလွှတ်နိုင်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထိုင်း နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းပြီး အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
“ကျနော်တို့ဘက်ကလည်း ရနောင်းမှာ အလုပ်သမား ပို့ဆောင်ရေး စင်တာတခု ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် သွားမယ်ဆိုရင် လုပ်သားတွေ အတွက် အကျိုးရှိမယ့် လုပ်ငန်းတွေကို ဖော်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်”ဟု ဦးသိန်းဆွေက ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ MoU ဖြင့် အလုပ်သမား ခေါ်ယူရေး အတွက် ဆက်လက်ပြီး ထိုင်းအလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိများနှင့် မြန်မာ အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိများ အသေးစိတ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမည် ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
နှစ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ အတွက် လိုအပ်သည့် မြန်မာရေလုပ်သားများကို MoU စနစ်ဖြင့် စေလွှတ်နိုင်ရေး အပါအဝင် ထိုင်းရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများ မြှင့်တင် ရေး၊ MoU စနစ်ဖြင့် စေလွှတ်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်မှုကို နှစ်နိုင်ငံ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းရေး၊ မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများ၏ မိသားစု လွှဲပို့ငွေများ တရားဝင် လွှဲပြောင်းပေးပို့နိုင်ရေး တို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ထိုင်းရောက် အလုပ်သမားများကို ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး၊ မိခင်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်မည့် မြန်မာအလုပ် သမားများ ရှိပါက နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရကြား သတ်မှတ်နေ ရာများတွင် တရားဝင် လွှဲပြောင်းပေးရေး တို့ကိုလည်း ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးသည်ဟု ဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားဝင် နေထိုင်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိရန်အတွက် ထုတ်ပေးသော Certificate of Identity(CI) စာအုပ် ဆောင်ရွက် ပေးမှုကြောင့် ထိုင်းရောက် မြန်မာလုပ်သား ၁ ဒသမ ၂သန်းကျော်သည် တရားဝင်လုပ်သားများ အဖြစ် ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ နောင်တွင် MoU စနစ်ဖြင့် ပူးပေါင်း ဆာင်ရွက်မည် ဖြစ်ပြီး တရားမဝင် လုပ်သားပို့သူများကို အရေးယူနိုင်ရေး ကိုလည်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် ထိုင်းအစိုးရက ငါးဖမ်းလှေ အလုပ်သမားများကို အလုပ်ချိန်၊ နားရက်၊ လုပ်အားခ စသည်တို့ကို ဥပဒေနှင့် အညီ ပေးရန် သတ်မှတ်ထားသော်လည်း လုပ်ငန်းရှင်များက လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းသေးကြောင်း၊ ငါးဖမ်း လှေ အလုပ်သမားများကို ရနိုင်သမျှ ညှစ်ထုတ်ခိုင်းချင်သော်လည်း ထိုက်သင့်သည့် အခွင့်အရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ဘေးကင်း လုံခြုံရေးအတွက် စီမံ မပေးချင်သည့် အတွက် လက်ရှိ အနေအထားအတိုင်း ဆိုလျှင် သွားရောက် လုပ်ကိုင်ရန် မသင့်သေး သည့် အနေအထားဖြစ်ကြောင်း ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ကွန်ရက် (M.W.R.N ) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်ဌေးက ပြော သည်။
“လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ အလုပ်သမားတွေကို အခွင့်အရေးပေးချင်စိတ်၊ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးကင်း လုံခြုံစိတ်ချရအောင် လုပ်ပေး ချင်စိတ် တကယ့်ကို ထင်ထင်ရှားရှား မပြနိုင်သေးရင် အလုပ်သမားတွေကို စေလွှတ်ရေးက မလုပ်သင့်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်” ဟု ဦးစိန်ဌေးက ဆိုသည်။
ပင်လယ်ထဲတွင် လုပ်ကိုင်ရသည့် ငါးဖမ်းလှေလုပ်သားများသည် သာမန် စက်ရုံ အလုပ်သမားများထက် လစာ ပိုမိုပေးချေ မှု၊ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးကင်း လုံခြုံမှုများ ရှိရန် စီမံထားပေးမှသာ အလုပ်သမားများကို စေလွှတ်သင့်သည်ဟု ယူဆကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ပင်လယ် ရေလုပ်ငန်းခွင်တွင် ရေလုပ်သားများ၏ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရခြင်းများ ရှိပြီး ထိုင်းအစိုးရ၏ ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ယခင်ထက် လျော့နည်းလာသည်ကို တွေ့ရသော်လည်း ပြဿနာများ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာအလုပ်သမား ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AAC)မှ ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ကိုရဲမင်း က ပြောသည်။
“ရေလုပ်သားတွေက အချင်းချင်းဖြစ်စေ လှေဦးစီးနဲ့ ဖြစ်စေ အနိုင်ကျင့်ခံရတာ ဖြစ်စေ မကြာမကြာ ပြဿနာ တက်တာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီလို ပြဿနာတွေကိုလည်း နိုင်နိုင်နင်းနင်း ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ ဆိုတာ နှစ်ဘက်စလုံးက စီမံကိန်း တခါ တည်း ချထားသင့်ပါတယ်”ဟု ကိုရဲမင်း က ဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားဝင် နည်းလမ်း၊ တရားမဝင် နည်းလမ်းတို့ဖြင့် သွားရောက် လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ၃ သန်းမှ ၄သန်းကြား ရှိပြီး ပင်လယ် ငါးဖမ်းလှေ လုပ်သား သိန်းဂဏန်း ရှိသည်ဟု ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရွှေ့ ပြောင်း အလုပ်သမား ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများက ခန့်မှန်းထားကြသည်။
Topics: မြန်မာ ရေလုပ်သား ၆ သောင်းကျော် ထိုင်းခေါ်ယူမည်